Stephen Curry Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
China, May 6, 2021
musha nyika dzakabatana Vatambi veBasketball Stefani Curry Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Yedu Stephen Curry Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peNyaya yehucheche Nyaya yake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mudzimai, Vana, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu Hwega.
Muchidimbu, iyi Hupenyu Hupenyu hwaSteph. Isu tinotanga kubva pamazuva ake ehudiki, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira. Kuti uve nehupenyu hwako hwekuda kudya, heuno hudiki hwake kune vakuru gallery - chidimbu chakakwana chaStephen Curry's Bio.
Hongu, munhu wese anoziva nezve hunyanzvi hwake hwekupfura. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Stephen Curry Bio iyo iri inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina imwezve ado, ngatitangei.
Stefani Curry Childhood Indaba pamwe Untold Biography Chokwadi: Upenyu Hwekutanga
Stefani Curry akaberekwa musi we 14th weChitatu 1988 muAkron, Ohio, USA Akazvarwa kuna amai vake, Sonya Adams (aive keroji yevolleyball panguva iyoyo) uye kuna baba vake, Dell Curry (imwe nhengo yeCleveland Cavaliers).
Kuzvarwa kuvabereki vaive vatambi vanoshingairira, zvaive zvakasikwa kuti mucheche Stefani adzidze tambo dzebasa rababa vake sezvo Dell Curry aiwanzotora Stephen nemunin'ina wake Seth, kuenda kumutambo weBasketball, achivapa rudo uye mukana wekumutarisa achipfura panguva kudziya-kumusoro. Izvi zvakabatidza rudo rwake kumutambo sezvinoonekwa mumufananidzo wake wehudiki pazasi.
Hupenyu hwaStefano hwakakanganiswa zvakanyanya nenzvimbo dzakatamirwa nemhuri yake kuitira kuti agadzirise basa raDell Curry reBhasiketi. Nekudaro, Stephen aive nemakore ake matanhatu ekutanga edzidzo yekutanga pa Chikoro chechiKristu cheMontessori cheLake Norman yakavambwa nevabereki vake Mhuri payakatamira kuCharlotte, North Carolina.
Kunyange zvazvo Stefani aive pachikoro chesekondari, dzidzo yake yakanga isiri kudonhedzera kubva mumutambo akawira murudo nemwana. Zvechokwadi, chikoro chekutanga chakamudzidzisa nzira yekudzidza nenzira yake pachake, kubata simba rake, kushanda pahutera hwake uye kukudziridza pfungwa yokuti aigona kuita chero chinhu. Mukuwedzera, mazuva ake okuberekwa (mufananidzo uri pasi apa) akashanda sechiyeuchidzo chezvipo zvaaiva nazvo uye zvaaitarisira kuzadzikisa.
Mushure mekudzidza kwaStefano, mhuri yake yakatamira kuToronto kunogonesa Dell Curry kupedzisa basa rake reBasketball senhengo yeRaptors. Iko kusimudzira kwakawona Mudiki Stephen achitora nhanho imwe kuenda kumberi mukukura uye kushuvira sezvo iye asina kungoenderera mberi nedzidzo yake kuchikoro chesekondari (Queensway Christian koreji vakomana) asi akatungamira timu yechikoro yebhasikiti kumukundi wemwaka.
Kurega basa kwaDell Curry kubva kune nyanzvi bhasiketi kwakagumisa Stephens anonakidza uye anonzwika-akanzwa stint kuQueensway Christian koreji. Yakanga iri nguva yekuenderera mberi, uye kuna Stefano, kufambira mberi kwaireva kubatanidza pane zvakapfuura zvakawanikwa uye kumisikidza maseiri ezve zviitwa zvitsva.
Panguva ino, iye anopfuura kare aidiwa kuwana simba nekusigirwa kubva kuna baba vake vakapedza basa uye pamwe nekupinza mumakore ake akawanda ehupenyu sezvo mhuri yakadzokera kune Charlotte.
Kudzokera kuCharlotte, Stephen akanyoreswa kuCharlotte Christian High Chikoro uye akatambira timu yepakati chikoro. Panguva ino, zvakave pachena kuti baba vake vaive vakamukanganisa zvakanyanya paari. Mhedzisiro iyo murairidzi wepachikoro, Shonn Brown aigona kupupura sezvaakati:
"Kunyangwe Stefano aive mudiki chaizvo, aigona kupfura bhora, Achifunga chimiro chake chinoshamisa, ini ndaigona kutaura kuti aisada basketball chete asi anga ari pasi pekurairwa kwakanaka".
Paakapedza chikoro chake chesekondari uye akafuridzirwa nekurudziro yababa vake, Stephen aida kutamba timu yaimbove yababa vake, Virginia tech asi akatarisana nekurambwa nemurairidzi, Seth Greenberg. Stefano zvakadaro akanyoresa Davidson College munaNovember 2005 mushure mekugutsikana nemurairidzi, Bob McKillop, uyo aive nekutenda kusingazungunuke mune rake ramangwana sezvo aive akatarisa nyeredzi diki iri kusimuka yakatamba makore mazhinji apfuura pazera diki regumi.
Stefani Curry Childhood Indaba pamwe Untold Biography Chokwadi: Simuka Mukurumbira
Davidson Koreji yakapa iyo yekuvhura pad iyo yakaita kuti Stephen Curry azivikanwe nenyika. apa, akatumidzwa zita reSouthern Conference Player wegore, akaisa rekodhi-yenguva dzese mbiri Davidson neSouth Musangano pamwe nekumisikidza runyorwa rweimwe-mwaka NCAA marekodhi matatu akagadzirwa.
Nekudaro, Stephen curry haana kupedzisa degree rake paDavidson College sezvo akasiya gore rapfuura muna 2009 kunokwikwidza muNBA yeGolden State Warriors. Kubudirira kwake neGolden State Warriors kuNBA kwanga kusiri kwekushamisa chete asi kwakanyanya kudarika kushamisa. Vamwe vese sezvavanotaura inhoroondo.
Stefani Curry Childhood Indaba pamwe Untold Biography Chokwadi: Kubatana Kwokutanga Upenyu
Paingova nemukadzi mumwe chete mune yerudo nyaya yaStephen, Ayesha uye iye zvinofadza kuve iye akazoba iyo basketball genius zita. Yavo nyaya yerudo yanga isiri labyrinth. Kunyangwe dai zvaive zvakadaro, isu taizoramba tichifamba newe kuburikidza nezvatinoita nguva dzose.
Shiri mbiri dzerudo, Stephen naAyesha vakatanga kusangana kuburikidza neboka ravo rechechi. Ivo vaive vechidiki panguva iyoyo uye Stefani akaita zvakawanda kuti arambe achifarira maari padanho repasi-kiyi. Rudo rwake rwepachivande kwaari rwakaburitswa kunze kwekuti vabereki vaAyesha vakamurambidza kubva mukushushikana nemwana chero kuchikoro chesekondari.
Zvisinei, Stefani aiva murume wechidiki ane mwoyo murefu uye akaramba akatarira pamutengo kunyange pashure pokunge apedza chikoro chesekondari. Makore mashomanana gare gare, apo Stefano aive mukoroji mudiki kuNorth Carolina, akasangana nechokupwanya kwake kuburikidza ne facebook ndokutanga danho rokutanga rakashinga hwehukama hwavo nekutsvaka hangout.
Pavaive vakarembera, Stefano aida kusundira rombo rake nekuzendamira kumeso kwaAisha kuti atange kutsvoda kwavo kwekutanga asi Ayesha anga asina kugadzirira kuyedza kwakashinga. Vaviri ava zvisinei vakaita kutsvoda kwavo kwekutanga munzira yeimba yevabereki vaStephen kuCharlotte. Nzvimbo imwechete yakagarisa vaviri ava apo Stefano paakazomupfimba.
Vakaroora musi we 30th yaJuly 2011 apo Stefano akanga akwegura 23 uye Ayesha, 22.
Achiratidza kuti nei akafunga kugadzirisa paaiva muduku akadaro Stephen akatsanangura kuti:
"Ndaiziva kuti ndakanga ndawana mukadzi akakodzera uye ndaida kutanga noupenyu naye."
Imba yavo yakakomborerwa nevanasikana vaviri, Riley Elizabeth Curry (akazvarwa muna Chikunguru 2, 19.) Ryan Curry (akazvarwa muna Chikunguru 2012, 10). Panguva yeichi positi Ayesha ane nhumbu zvakanyanya uye nyika iri kushuvira kuziva bonde revazvino curry's.
Kyrie Irving Nyaya Yevamwe Vana Plus Untold Biography Facts
Stefani Curry Childhood Indaba pamwe Untold Biography Chokwadi: Upenyu hweMhuri
Stefano curry akaberekerwa vabereki vakange vari vatambi panguva iyoyo. Gara shure apo tinokuendesa iwe kukuudza nezvemutambo wemitambo ine rudo mhuri.
Baba: Baba vaStephen curry, Dell Curry aimbove nyanzvi bhasiketi mutambi uyo akatamba muNational Basketball Association kubva muna 1986 kusvika 2002 asati abva pamudyandigere saCharlotte Hornets 'wenguva dzose anotungamira mukwikwidzi.
Akanga ari simba rakanaka kuna Young Stefano uyo achiri kutarisa kumusoro kwaari nokuda kwekurudziro uye kutsigirwa. Kutaura zvazviri, Stefani anoda kutamba muNBA kwemakore 16 sababa vake vakaita vasati vasimuka.
Amai: Smai va tephen Curry, Sonya Curry aimbove mutambi wevolleyball akatambira Virginia Tech pamberi pokuberekwa kwaStephen uye parizvino mutariri wechikoro cheAmerica.
Kunyange zvazvo Basketball yakanga isiri yake, Sonya akaita kuti Stefani apfeke mutambo wake mudare nekuita kuti abhadhe chikwereti chekudzoka. Kunyatsotsigira zvakadini amai vangadaro?
Hanzvadzi konama: Stephen curry munin'ina, Seth Adham Curry ari zvakare nyanzvi yeAmerican basketball mutambi anotambira Dallas Maverick weNational Basketball Association.
Aive imwe nguva koreji basketball player kwegore rimwe neRiberty Flames asati aendesa Duke Blue Devils. Kunyangwe Seti asina kuwana mukurumbira wakawanda kunge mukoma wake mukuru, anotenda kuti ari nani kupfura kupfuura Stefano.
Hanzvadzi sikana: Stefano curry hanzvadzi yaSydel Curry imwe nguva mutambi wevolley uyo akatambira Elon University asati abva pamudyandigere mu2017.
Stefani Curry Childhood Indaba pamwe Untold Biography Chokwadi: Career Facts
Stefani Curry ave achida basketball kubvira achiri mwana, tinokuunzira mashomanana emakomborero akawanda aakawana nokuda kwekuda kwake kusina kufarira kana kubudirira kukuru mumutambo.
Akanga ari wechipiri mukuru wechikwata chegore rake mutsva ku Davidson college mune gore ra2006.
Akanga ari maviri akapiwa muchengeti weNational Basketball Association Yakaisvonaka Inokosha Player Award inozivikanwawo seMVP awards (2014-2015, 2015-2016).
Iye ndeye 2 nguva FIBA ​​medalist yegoridhe (2010 ne2014). FIBA inozivikanwawo seSouth African Basketball Federation.
Stefani Curry Childhood Indaba pamwe Untold Biography Chokwadi: Other Facts
Stephen Curry ndemumwe anoita zvaanotenda mazviri. SemuKristu akazvipira anorarama zvinoenderana nendima yaanofarira yemubhaibheri: VaFiripi 4:13, "Ndingaite zvinhu zvese naiye Kristu anondisimbisa," izvo zvaanowanzo pfupisa kuti "ndinogona ita zvinhu zvese ”paanenge achinyora pasimeti dzake.
Stephen curry zvakare ane chipo chegoridhe, zvirokwazvo "anogona kuita zvese zvinhu".
Anopfeka iyo Nha. 30 kukudza baba vake. Zvinoenderana nemunun'una waStephen Seti;
"Kupfeka nhamba ye30 jersey kwakafanana nekubhadhara baba vedu. Iye ndiye akatidzidzisa mutambo uye zvinoreva zvakawanda kwatiri. Akanga akapfeka jeresi kubva kuchikoro chake chesekondari uye saka Stephen neni takapfeka jeresi imwe chete. Zvakafanana nenhamba yemhuri. "
Unyanzvi Hwake Ndihwo Hwakasikwa Iko Video Game Designers Vari Kurwisana kuti Vadzoke zvakare
Ari kunyanya kubatanidzwa mune rudo.
Akaberekerwa muguta rimwe chete nechipatara izvo Lebron James akaberekwa. (Akron General Medical Center Ohio, United states).
Tinokutendai nekuverenga yedu Stephen Curry Yehucheche Nyaya uyezve untold biography chokwadi. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana kuti utibate!